Xaflad loo qabtay arday ka qalin jabisay Jaamacadda PSU”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xaflad loo qabtay arday ka qalin jabisay Jaamacadda PSU”SAWIRRO”
Madaxweynaha Dawladda goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ka qayb-galay xafladd loo qabtay arday ka qalin-jebisay Jaamacada PSU, waxaana ay ka koobnaayen ardaydaasi shan-qeybood oo tiradoodu dhantahay 105-arday, 76-wiil iyo 29-gabdhood.
Wasiirka Waxbarashada maamulka Puntland Cali Xaaji Warsame, Wasiiro katirsan xukuumada maamulka Puntland, Maamulka gobolka Nugaal, maamulka Jaamacadda PSU, Waxgarad, waalidiin, aqoonyahano, mas’uuliyiin kala duwan iyo ardeyda Jaamacadda ayaa si farxadi ku dheehantahay uga soo qeyb-galay munaasibadda.
Madaxweynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ardeyda ka qalin-jebisay Jaamacadda PSU oo uu sheegay inuu kala qayb qaadanayo farxadooda iyo guusha ay gaareen maanta, waxaana uu ugu baaqay inay sii wadaan dedaalka waxbarsho ee ay wadaan si ay dalka iyo dadkaba ugaga faa’iideeyaan waxa ay barteen.
” Runtii waxaa farxad ii ah inaan ka soo qeyb-galo xafladd ah qelin-jebin isuguna jirta farxad iyo dhamaystir waxbarashada qeybteed, marka maalintaan taariikhiga ah ee nololshiina maalmaha ugu wanaagsan kamid ah inaan idinkala soo qeyb-galno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in ardayda qalin-jabisay maanta boqolkiiba todobaatan ( 70% ) ay yihiin arday shaqaysa, ardayda kale ee aan iyana haysan shaqada ayuu Madaxweynuhu u rajeeyey inay helaan shaqooyin wanaagsan si ay uga mira dhaliyaan waxbarashadooda.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Dawladda goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shahaadooyin, shahaado sharafyo iyo abaalmarino kala duwan gudoonsiiyey dhammaan ardayda qalinjabisay, dhinaca kale maamulka jaamacadda iyo ardayda jaamacada ayaa waxaa ay bilad sharaf gudoonsiiyeen Madaxweynaha taas oo uu ku mutaystay dedaalka iyo horumarka balaaran ee uu Puntland gaarsiiyey mudadii yarayd ee uu hogaanka dalka hayey.
Wasiirka Haweenka oo ka warbixisay shirkii lagu qabtay New York”SAWIRRO”